Baaqashada Kulamada Golaha Shacabka oo fadhiid ka dhigeysa shaqada dowladda – Kalfadhi
Kulankii 31-aad ee Golaha Shacabka ayaa ilaa hadda qabsoomi la’. Inkasta oo sababta baaqashada kulamada Golaha ay tahay khilaafka Guddoonka Golaha, oo isku mari la’ Hindisaha ka dhanka ah Madaxweyne Farmaajo iyo Guddiga Maaliyadda oo ay Kuxigeennada Guddoonka Golahu kala direen, Guddoomiyuhuna shaqa geliyey, haddana Xildhibaannada Golaha qaar waxay dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan dib loogu furo kulamada Golaha.
Golaha Shacabka waxa uu 3 todobaad ka badan kulmay hal maalin oo kaliya, waxaana maalintaas ka hor iyo kadib baaqanayey isu imaatinka Golaha, oo khilaafkaas haysta dartii u yeelan la’ kulamo shaqo, oo xiriir ah.
Hase ahaatee Guddoomiye Kuxigeenka Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, ayaa sida uu horay u sheegay waxa uu faray Xoghaynta Golaha ineysan Xildhibaanno gaar ah, si gaar ah, u isticmaali karin Xarunta Kulamada Golaha Shacabka, isagoo si cad u sheegay inuusan dooneen iney kulamo dhacaan inta uu yaalo Mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha, oo uu horay u diiday.
Khilaafka Golaha Shacabka dhexdiisa ah waxaa culeys kusii daray, oo la rumeysan yahay iney fadhiid ka dhigtay shaqada Golaha, inuu Mooshin ka yaalo Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo ay diidan yihiin Xildhibaanno Wasiirro u badan.
Taas, oo lagu sii daray in ay Dowladda Federaalka Somaaliya (DFS) soo xirtay Mukhtaar Roobow Cali, oo ah Musharrax loo ogolaaday inuu u tartamo jagada Madaxweynaha Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), waxay sii murjisay ku haysashadii ay Xildhibaannada qaar Madaxweynaha ku haystaan “Qiyaano Qaran”.
Sida ay Xildhibaannada qaar si aan rasmi ahayn ugu sheegeen Kalfadhi, waxaa adag inuu xitaa Golaha Shacabku kulmo todobaadka soo socda, sababtuna waxay ku sheegeen sida ay Xukumaddu u cakarineyso xaaladda siyaasadeed ee dalka, sida ay hadalka u dhigeen.
Reysal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa, isaga oo u qudbeynaya Jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Dooxa-Qadar, waxa uu sheegay ineysan marnaba yeeli doonin in la cabsi geliyo. “Inta inagu aan joogno xukunka waxaan idiin balan-qaadaayaa ineynaan aqbali doonin in nala cabsiiyo” ayuu yiri Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre. Hadalkaas waxay dad badan u fasirteen inuu Reysal Wasaaruhu, ugu yaraan, uga jawaabayo dhaqdhaqaaqyada Xildhibaanada Golaha Shacabka qaar ay wadaan ee uu ka mid yahay Mooshinka ka dhanka ah Madaxweyne Farmaajo.